डेंगु संक्रमण बढ्दै, यो कसरी सर्छ ? के भन्छन् चिकित्सक ? - Everest Dainik - News from Nepal
याे पनि पढ्नुस टेकुका तीन जना डाक्टर नै डेंगुका संक्रमणमा, एकैदिन ५ सय बढीको रक्त परीक्षण
डेंगु ज्वरो एडिस जातको लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने एक प्रकारको सरुवा रोग हो । डेंगुको भाइरसबाट संक्रमित लामखुट्टेको टोकाइले यो रोग सार्छ । यो लामखुट्टेले विशेषगरी दिउँसो मात्र टोक्ने गर्छ । बर्सातको समयमा सुरु भएपछि डेंगु ज्वरोको प्रकोप बढ्न थाल्छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।